Ọ bụrụ na e a ime mmụọ edemede, ọ ga-akwụsị merụsịrị.
Ndị na-abụghị nke ime mmụọ edemede, n'ụzọ ime mmụọ iro ụra. Nke a bụ oké ihe ize ndụ, na sleeper maara ihe na-eme na ọ dịghị ihe contingency.
Na ime mmụọ slumber nke a ize ndụ, bụ ihe na Jizọs na-akụziri. Ọ na-egosikwa na a ga-abịakwasị ndị kwere ekwe dị nnọọ n'ihu Ọ na-abịa. A kọwara nke a na ozizi nke Jizọs na Matt. 25
Ọtụtụ ndị na-ilu na-aghọtaghị ihe ize ndụ nke a iro ụra ma biri na ogbenye nkwadebe. Otu bụ eziokwu na oge anyị na ndị na-n'ụzọ ime mmụọ na-ehi ụra na-amaghị ma ọ bụrụ na ha na-ehi ụra. Ha mkpa ha na-ada site na ndị ọzọ na-amụ anya.
Ị na-a Christian anya ma na-aghọta na Jizọs nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla - eme ihe unu pụrụ ime ka ndị ọzọ - a nwere ike ebighi ebi ekele maka nke ahụ!
A na ngwá ọrụ na-ekwurịta okwu edemede nwere ike inye a Christian akwụkwọ. Anyị nwere ugbu a na-enwetụbeghị ụdị enye on akwụkwọ Time na-eteta site Holger Nilsson. Anyị na-ere 10 mbipụta 100: -! Ọ bụ ogologo oge karịa price nke a magazine!
Gaferenụ ịzụ ụlọ akwụkwọ a. Ị nwere ike ịzụta ọtụtụ akwụkwọ nchịkọta ma ọ bụrụ na ị chọrọ, 20 PC. 200: - 30 PC. 300: - na na. Mbupu ego ga-kwukwara na 45 - kwa iri na abuo akwụkwọ maka ndekọ-acha anụnụ anụnụ akpa. Ịzụta ugbu a na-ekere òkè ụka, enyi na na.
Post ego atụ 145: - 10 mbipụta na Ntuziaka Nne na Nna 36 64 81 - 0. Payee Antikvariatet, Vetlanda.
N'okpuru ebe a bụ isiakwụkwọ aga na akwụkwọ:
1 Aware nke oge
2 A oge analysis
3 Isi ike
4 A echiche nke oge anyị
5 amaghị nke oge
6 ichegbubiga onwe ya ókè nke oge anyị
7 Waste ugboro
8 Understanding nke oge
9 oge tupu Jizọs laghachiri
10 amụ anya na oge